Abafile ekuhlaselweni e-Utrecht bakhombisa ukuthi ngeke kube yi-PsyOp? : UMartin Vrijland
Abafile ekuhlaselweni e-Utrecht bakhombisa ukuthi ngeke kube yi-PsyOp?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 March 2019	• 32 Amazwana
Nakuba konke kubonakala sengathi kwakuyi-PsyOp ehlelwe kahle (ukusebenza kwengqondo) lapha, usuku olwedlule ukhetho, kunezindaba ezikholisayo mayelana nokufa kwangempela. Uzwa kuphi futhi ubone lezo zindaba? Kwesokudla: kumaphephandaba. Futhi nakanjani ubona emithonjeni yezokuxhumana "imiprofayili yangempela" nabangani kanye nomndeni wangempela abavikela ukuthi bazi izisulu nezihlobo zabo. Ngokuqinisekile kufanele uthathe isinqumo kuwe noma ngabe ukholelwa ekuhlaselweni okunjalo noma cha, kodwa ngiqhubeka ngibonisa izinsiza kanye namathuba abahulumeni nabamaphephandaba abazandleni zabo zokudlala nabantu. Zingakha amaphrofayela wezindaba zenhlalo ngokuphelele ngaphandle kweluhlaza okwesibhakabhaka (kodwa ngenethiwekhi ethembekile). Futhi ngakho awukwazi ukusho ngokuqinisekisiwe noma labo abasabela ekuthunyelwe kwakho kwe-Facebook ngamazwana afana ne- "Kuyiqiniso ngempela ngoba bangomakhelwane bami"Noma"Ngiyazi ukuthi indoda ngoba indodana yami isesikoleni lapho"(Njalo njalo) empeleni abantu bangempela. Futhi sinayo inethiwekhi enkulu Inoffizieller Mitarbeiter lokho kudonsa isigubhu somfakazi lapho kudingeka.
Imidiya isiteshi sesandulela-mlando sohulumeni futhi sichaze wena nabantu izithombe abangaba (futhi bafuna ukukukhombisa) ukuqondisa umbono wakho wezwe. Kusuka emithonjeni yezenhlalo sinawo (ngemidiya efanayo) umqondo wokuthi kukhona amabutho aseRussia onke ama-troll athola isimo sengqondo ku-Facebook naku-Twitter ngamaphrofayela amanga, kodwa ukuthi lokhu kungenxa yomyalelo osungulwe kwenzeka futhi, Yebo, kunqatshelwe. Eqinisweni, ungasho ukuthi zonke izindlela zobuchwepheshe zikhona ukuze zibeke yonke into esenzakalweni futhi zibone ukulawulwa kokubheka ngezindaba zomphakathi kanye nabezindaba zenhlalo kuze kube nemininingwane engcono kakhulu. Kungenzeka nokuthi i-PsyOp ivele isebenze nabantu abakwehlisiwe. Lokhu kungasetshenziswa kokubili abahlukumezi nabahlukumezekile (nofakazi). Kukhona lapho isikhwama semali kufanele siphumelele, ngoba kufanele unikeze abantu ubunikazi obusha nokuhlala ezweni elikude lapho kunesidingo khona. Noma kunjalo, ukubaluleka nomthelela wemisebenzi enjalo kuhle futhi ungalindela ukuthi kungabiza kancane. Phela, kungukungeniswa okungenakuphikiswa kwamaphesenti ombuso wombuso angasetshenziswa ukulawula izigidi.
Kodwa-ke, uma sibona izithombe zezihlobo ezidabukisayo noma izihlobo, lo mzwelo uthatha ngokushesha futhi sikhetha ukuphonsa umqondo wokuthi kukhona i-PsyOp kudoti noma kunjalo. Unesibusiso sami, kodwa ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngokwezomthetho nangokwezimali akukho lutho lokuma endleleni yokudlala ngezindaba eziningi zokukhohlisa ngokusebenzisa iziteshi ezijwayelekile. Phela, livela ebhodweni lentela.
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, kuyaphawula ukuthi kwakukhona isitatimende sikazwelonke sokuthutha umphakathi nokuthi abantu abaningi bahlala ekhaya ngenxa yalokho. Indawo yokuhlaselwa yayiyinto ephawulekayo, ngoba empeleni yayiyikhoneni ngempela (kungani ungakhethi isikhungo?). Ngaphezu kwalokho, umthelela wokuhlasela okungenzeka ngosuku lwesiteleka akulindelekile ukuba kube kuhle njengokuthi ukhethe usuku olujwayelekile lokusebenza nendawo ematasa. Izindaba zezofakazi azicacile kakhulu, zakha umqondo wokuthi asisekho, kodwa kwenzekani ngempela? Ingabe lo wesifazane wadutshulwa esitokisini bese bebona owesifazane elele lapho? Kanjalo uGökmen Tanis wadubula ngefasitela esivela ku-tram? Lowo ozwayo plop plop plop (silencer) kanti omunye wezwa pang pang pang (akukho damper). Ngakho udubula othile kusuka ku-tram; khona-ke ukuphuza okuphuthumayo kukhishwa (noma i-tram driver freakes), kodwa lona wesifazane wayesevele eseduze (noma ngemuva?) tram bese wonke umuntu ephuma ngaphandle futhi uGökmen uqala ukudubula futhi? Lo wesifazane waphuma kanjani ku-tram? Futhi kungani ehamba ngaphandle kwe-tram phakathi kwe-24 Oktoberplein? Noma ingabe ivele igxume lapho iminyango ivaliwe? Noma uTanis wamdubula ngaphandle kwe-tram futhi wangena (ngenkathi iminyango ivaliwe futhi i-tram yayisebenza) bese uphinde uphume futhi? I-Strange (uma ingenakwenzeka) nendaba engaqondakali, ucabanga?
Ufakazi uDaniel Molenaar udlala indima ebaluleke kakhulu kule ndaba. Ngendlela, kungani kukhona kuphela abafakazi be-2 emithonjeni? Ngokuqinisekile i-tram (ngosuku lwesiteleka sezokuthutha zomphakathi) yayinebagibeli abaningi ababone okuthile? UDaniel Molenaar ungufakazi othakazelisayo kakhulu. Ulandele inkambo e-University of Utrecht hhayi nje inkambo. Wafunda i-New Media ne-Digital Culture. Ngakho-ke kufanele aqonde okudingekayo mayelana nokuthi wena amafake ajulile angenza, kodwa lokho eceleni. I-University of Utrecht iyisiphephelo sikaProf. Dr. idr. Beatrice de Graaf (igama elihle leqiniso). Ku-2004 wathola i-PhD yakhe e-University of Utrecht ngokusatshalaliswa nge-GDR, okuthakazelisayo ngokukhethekile, ngoba lokhu kwakuyisikhathi se-Inoffizieller Mitarbeiter. Abantu empeleni badlala indima kabili enkonzweni yemfihlo ye-East Germany. Umqondo wokuthi lokhu akukwenzeka eNetherlands nokuthi lesi simo sinyamalale ngokuphelele mhlawumbe ukukhohliswa okukhulu okudingeka sikwenze.
Omunye ufakazi ungumfana ogama lakhe linguNicky van Grinsven. Lofakazi angase ahlasele indaba ka-Allah Akbar. Uzwile lokhu uGökmen Tanis athi (ngokungafani noDaniel Molenaar). I-Tanis kumele ibe ngumshayeli wokushayela ukuze uthole uNicky kumamitha angu-15 (faka indaba yakhe ku I-Nieuwsuur). Uma udubula, yenza kahle, ungasho. Kodwa indaba ka Allah Akbar yinto yokudla enhle yokudideka "Ingabe ukwesaba manje noma cha futhi kungenzeka mhlawumbe i-ex-jihadist ehlakaniphile?". Futhi lokho kungukudla okumnandi okuvusa inkinobho yesokunxele neya kwesokudla ezombusazwe (kanye nezimvu) baqhubeka bevota ngethemba lamanga lamaphathi okungenzeka empeleni libalimele manje).
Singasho ngokuqiniseka ukuthi ukuhlasela okunjalo kufakazela isidingo samagandane. Amanye amathuluzi amasha nawo asetshenzisiwe, njengokulayisha izithombe zefoni kwisayithi yamaphoyisa (hhayi emithonjeni yezemfundo; funda 'ukucutshungulwa'), ukwethulwa kwekbenveilig.nl kanye Inkinobho yokuhlola i-Facebook ongavumela abangani bakho ukuthi bazi ukuthi ku-1x ukuthi usaphila (funda 'idatha enkulu'). Ngokokuqala ngqa, amaphoyisa asebenzisa i-drones ukufuna umenzi wobugebengu futhi uhulumeni wakwazi ukuhlola ukuthi izakhamizi zahlala kanjani ngaphakathi ngemuva kokushaya nokusebenzisa izinga lokusongela kwe-5. Eminyakeni yamuva, abantu baye bajwayele amakhodi ezinsongo ngokusebenzisa imibiko yesimo sezulu (ikhodi ephuzi, ikhodi ebomvu, njll) futhi manje "ngokuthuthumela kwangempela".
Okwamanje, sekukhona izingxabano ukuthi kunesizathu sokucabanga ngesaba, ngoba umfowabo kaGökmen angase ahlotshaniswe neqembu eliqine ukulingana elivela eTurkey (bheka lapha). Yilokho okuyiqiniso ukugcina ukudideka nokugcina umnyango uvulekele ukwesaba. Lokho Gökmen akukho buhlobo kanye nezisulu, kukhona nezinye izingxabano zokukhetha ukwesaba (kodwa kungani kuhloselwe ukuhlaselwa komuntu we-1?). Ngaphezu kwalokho, kukhona (ngalesi sikhathi akukho pasipoti) inothi elitholakala ku-Renault Clio ukuthi iGökmen ngabe ngabe wasebenzisa ukuhamba. Isiqu RTL News: Ku-Renault Clio obomvu ukuthi umsolwa oyinhloko uGökmen T. wasebenzisa ngemuva kokuhlaselwa, kwatholakala inothi elizobonisa lokhu, kubika iNkantolo Yomphakathi. "Imvelo yamaqiniso" izoqinisekisa nokuthi. I-Gökmen yayinezinyosi ze-coke futhi ikhohlwa ukuthatha inothi ebalulekile naye ekucindezelekeni. Sizobona ukuthi yini eyenziwe ngalokhu futhi. Yiqiniso futhi sinendaba yintombi eyazi uGökmen njengendlela ye-coke snorer kanye nokusakaza I-Pauw & Jinek wabonisa izolo isithombe somuntu ongenakulinganiswa owayesebenzisa izidakamizwa eziningi nophuzo oludakayo. Futhi ngakho wonke umfutho wezokuxhumana uguqulwa engxoxweni enhle ngokuphathelene nokuthi ingabe ingasabisa yini, noma izinhlelo zivivinyelwe usuku nokuthi usizo lombuso wamaphoyisa uphinde lwaxubha kulo.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: ad.nl, rtlnieuws.nl, ad.nl, uu.nl, npostart.nl, nos.nl, volkskrant.nl, elikhanyayo.nl, geenstijl.nl, herhaling.nl
UMason Wells usinda ekuhlaselweni kobuphekula be-3 futhi ukhuluma okokuqala
Amathegi: 24, ukuhlasela, Daniel Molenaar, bulala, Umdlalo, ngempela, afakiwe, balimala, Gökmen Tanis, Nicky van Grinsven, Isikwele sika-Okthoba, ubuhlobo, izisulu, ukwesaba, ubuphekula, Utrecht
19 March 2019 ku-13: 44
Kuhle ukuthi uphezulu kakhulu. Thola izigqila ezingqondweni zabo. Nokho kuyoba nzima. Ingabe sekukhona kakade ukuthi ummeli useliphi icala? Ummeli onokuxhumana okuhle noMbuso? Ubani obambe iqhaza kaningi? Kukhokhelwa ukuba umngane nezwe.
19 March 2019 ku-13: 52
Ngingathanda ukuyibiza ngokuthi i-media hypnosis. Abantu baphethwe yi-device hypnosis ukuthi ngokuyisisekelo bayifaka ngaphansi kwe-hypnosis ngezimpikiswano nemifanekiso (lapho ukunyakaza emuva nangemuva kuyindlela ebalulekile). Ngakho-ke ukuzulazula emuva nangemuva ngezindaba mayelana nokwesaba noma izinkinga zobudlelwane njll. Ngakho-ke imibuthano ejikelezayo ezindabeni ze-NOS nangemuva kwe-newsreader ne-weatherman / owesifazane.
Utshela kanjani abantu abangaphansi kwe-hypnosis ukuthi badla ilamula elimuncu ngenkathi umshuwalense ebaxelela ukuthi imango efudumele? Nge Rasti Rostelli, lokho kuyiqiniso konke okuhle kakhulu, kodwa bambalwa ababona empilweni yangempela ukuthi sibhekene ne-hypnosis futhi silungiselelwe empilweni yangempela.
19 March 2019 ku-14: 06
Yiqiniso, uMilton Erickson, ochwepheshe bephayona e-hypnosis, ubelokhu esebenza kanzima kulokho. Ukunciphisa ulwazi ngokubhekana nokungenazi lutho. Lokhu kwahlanjululwa kamuva yi-Tavistock kanti nakanjani kusetshenziselwa abasolwa abajwayele ukubeka umphakathi, ingu-injiniya (ingqondo) nabalingani babo bezengqondo, amathangi okucabanga asebenza ezinkonzweni ezihlukahlukene, njll.
19 March 2019 ku-14: 18
Vele uxoxe ngalokhu ekhokheni yekhofi, esikhundleni sezingxabano noma izinkinga zomndeni (awukwazi)
Vele uxoxe ngalokhu:
Iqiniso lokuthi isiteshi seVimeo sivaliwe kwisayithi esizimele kunazo zonke eNetherlands kubonisa ukuthi kuhlaselwa ukucindezela.
Amavidiyo ahlanzekile kakhulu kusuka kwamanye amasayithi nezithombe ezimbi kuVimeo futhi akeke sisho ngisho nezingosi ze-pornzi ze-funzige, ezingasetshenziswa iziteshi.
Bonke bahlala kwi-intanethi zonke iziteshi ezinamafilimu anjalo angcolile okwenza ubuchopho bakho bugule. Ngezinye izikhathi futhi kuyingozi kakhulu izingane ...
KODWA KANYE kodwa
Umzila we-Vimeo we-Heer Vrijland ususiwe kusukela ku-intanethi kuleli sonto, ngaphandle kwesixwayiso njengoba yena ngokwakhe ekhonjisiwe esihlokweni esandulele.
Lokhu kungaphezu kobufakazi bokuthi siphila ebubini obushiqela.
Abantu abezindaba abanamandla kumele baphinde bakhethwe kanye nonke (esikhundleni samaqembu ezombusazwe wezombusazwe) bavote wonke ama-apula abolile avela eMedialand futhi masithole ukhetho ngalokhu, ngoba siza manje siyazi ukuthi ezombangazwe ) i-Paws kuze kufike ku-Jinek Pauw futhi i-Nieuwkerkjes ibonisa ukuthi uDe Media ugeza ubuchopho bethu.
Bangabonisa amafilimu okubhubhisa kakhulu ku-TV naku-intanethi
Kodwa isiteshi se-Vrijland sikaVimeo sika-Vrijland sisuswe ngokuphelele ngaphandle kwesaziso, esifanele izwe lombuso wentando yeningi, UNGENZA
19 March 2019 ku-15: 26
Lolu hlelo oluyinkimbinkimbi kakhulu e-Utrecht luhlobene nokusebenza eNew Zealand. Ngakho-ke ngilindele imisebenzi efanayo nokukhula, ikakhulukazi eNtshonalanga, ekuqhumeni ku-2023 eminyakeni ezayo. Abezindaba bazoqinisekisa ukuthi ukulwa nokulwa kweTurkey kukhula phakathi kwabantu.
19 March 2019 ku-15: 33
Futhi voila! Futhi le popopi iphuma kuphi! Yini okumelwe uyidelele https://nos.nl/artikel/2164422-erdogan-waarschuwt-europeanen-jullie-zullen-niet-veilig-zijn.html
19 March 2019 ku-19: 31
@Iberi, i-idd Freemason Erdogan, abantu abaningi badlala kahle futhi. Impi kaPike kumele ifike futhi izofika ...
19 March 2019 ku-19: 40
I-1-2 emkhatsini we-Freemasons akuyona okokuqala ... Lapho uRutte eboleka isandla ngesikhathi sokhetho, u-Erdo unakekele i-spin, ngakho-ke abazalwane ngokwabo
19 March 2019 ku-17: 47
Ngangizibuza ukuthi i-18 March ingusuku olukhethekile?
Iminyaka engu-3 edlule ngomhla ka-22 Mashi kwakukhona ukuhlaselwa kwe-Zaventem. Lapho ngifuna ukubukeka emuva ngalolo suku, ngathola indaba elandelayo engaqondakali ngalokhu kuhlaselwa:
19 March 2019 ku-19: 37
Akukho i-RTL Bertelsmann AG, uTanis wenzé egameni le-AIVD ozofunga ngobuqotho ku-Willy
19 March 2019 ku-20: 13
Isazi esibalulekile samaSulumane esho ukuthi okwenzekayo emhlabeni wonke kuhlobene nokuqhutshwa kwempi yezwe le-3 futhi uthi i-Istanbul (Constantinople) izoba nengxenye ebalulekile kulokhu. Hlukanisa futhi ulawule kanjalo .. linda ukuthi bafika ngani ngoLwesihlanu i-22e, Tower Bridge, West Coast USA? Ubani ongathi ..
19 March 2019 ku-20: 23
Ngakho lokho kusebenza kahle, eh, Trolongren, awuboni yini ukuthi lezi zisebenzi zikahulumeni zinesithakazelo esihle kakhulu kubabastards ..?
"I-CTIVD ithumele isicelo eNdlu Yezimele ngoNovemba ukuze iphinde ibuke futhi ixoxe ngolwazi oluyimfihlakalo kahulumeni olusakazwa phakathi kwamazwe. Ngokunciphisa ukuyimfihlo, ama-watchdogs amahlanu afuna ukuqinisa ukubhekwa kwabo kwezinsizakalo zemfihlo. "
20 March 2019 ku-10: 30
Ngifanele ngihleke lokho njengokungathi amabutho ezokuvikeleka abonisa ngemuva kolimi lwabo 'kubaphathi' nakwabafundisi. Ngaphezu kwalokho, 'abaphathi' abafuni ukwazi konke ngoba babe nolwazi ngamacala obugebengu futhi bazoba nobugebengu obuqinileyo, njll. Ubani olawula 'abaphathi'? I-puppet show.
19 March 2019 ku-21: 30
Futhi, umkhankaso wokuqoqa imali:
21 March 2019 ku-11: 27
Uke wabona ukuthi lo muntu ungumfana ngengxenye yeminwe yakhe? Abantu be-Transgender bayonke
19 March 2019 ku-21: 31
Umbala wembongolo omncane (isithombe se-parool)
Manuel Chaguaceda wabhala:
20 March 2019 ku-08: 23
Ukuhlaziywa okuthakazelisayo kakhulu, kodwa ake siqale ngesineke silinde 'ingqikithi eyodwa' inguqulo ... 😉
20 March 2019 ku-11: 51
"Balekela imoto" bevela enkonzweni yezinhlekelele! umenzi ophuthumayo ubalekela ukubhala incwadi "abafowabo"? ke lowo owenza iphutha ukhokhela umthethosivivinywa ngocingo 'lomngane'?
21 March 2019 ku-08: 46
Ngezinye izikhathi awusasazi ukuthi kukhona okungezelelwe. Raid Trumanlaan. Umongameli waseMelika noma u-Trumanshow? Ukuhlaselwa kweMosque kuKristuchurch. Mosque noKristu Church?
22 March 2019 ku-17: 21
22 March 2019 ku-20: 38
Ngiyabonga kakhulu, yize lezi zikhombo zinikezwa amanzi amaningi
ukuhlaziywa kwenza umqondo omkhulu futhi iMedia / Amandla iyesaba, imininingwana ye-18, i-35 ayikwazi ukuthola okucacile
23 March 2019 ku-13: 04
Izigameko ezihlose ukubulala abantu abaningi ngangokunokwenzeka zivame ukushiwo. Lesi siphekula sashaya endaweni ethule, lapho ungalindele khona. Kuyini ukushaya ukuthi abashayi ukuziqhenya kweGay, Usuku lokukhunjulwa noma uSuku lweNkosi njengesibonelo. Njengamaphekula wangempela uzokwenza izenzo zakho phakathi kwesixuku. Njenge-Call of Duty, uyifinyelela njenge-psyop yaseNew Zealand. Futhi noma ngabe uphikisana nobuntu njenge-IS, kungani ungakhethi isitshalo samandla enyukliya? Gcwalisa ukuphepha, isisebenzi esisodwa esiqala isenzo sokungena noma sithatha esinye isisombululo. Kubonakala sengathi bakwenza lokho ngamapayipi e-oyile, kepha kungenzeka futhi ezinyaweni zamapylons aphezulu nokufakwa njengeNuon. Kodwa ke ngokuzumayo akukwenzeki. Ngesikhathi seholidi elinjalo lingase liguquke libe yizingxabano ezingalawuleki, kumele zihlale zilawulwa ngenye indlela ngeke zihambe njengoba zihleliwe.
24 March 2019 ku-16: 01
Ngeshwa, lokho kugcinelwe umndeni othize ... amasiko e-obelisk
24 March 2019 ku-11: 31
Yini engishaya ngayo yilapho encane kakhulu eyaziwa ngezisulu. Ngisho namaphephandaba akwazi ukubhala ngakho. Lapho umfelandawonye usanda kufa futhi isihloko sasilotshwe nsuku zonke, akukho lutho olulotshwe ngalezi "izisulu". I-1 yayo ingu-19 oneminyaka engu-Roos Verschuur oneminyaka engu-19. Kodwa uma nginguGebri leli gama, angitholi lutho mayelana naye. Ungalindela ukuthi i-XNUMX oneminyaka engu-ubudala owazalwa futhi ekhuliswa ngenkathi yezobuchwepheshe isebenza ku-Social Media. Ayikho i-akhawunti ye-Facebook, ayikho i-akhawunti ye-instagram, ayikho i-akhawunti ye-snapchat. Izithombe kuphela ozibonayo ku-Google yizithombe ezazisetshenziswa amaphephandaba.
Azikho izintombi ezithumela isithombe esihlangene naye ngamathekisthi afana nami ngizokuphola njll njll njll.
noma ngifuna okungalungile ngokuphelele. Kodwa leli cala liyancipha nxazonke.
24 March 2019 ku-11: 42
Akekho ubheka okuhle. Kodwa akukhathaleki ngoba abantu baxhunywe ngezindaba nemifanekiso ngabantu ababeka izimbali nohambo oluthile (lapho yonke imigudu yokufinyelela ivaliwe khona. Izithombe zingahle zenziwe ngaphezulu kwesofthiwe yokubuyabuyelela kwesintu .. ngubani ozokwazi ukuyihlola)
Kumele kuqashelwe ukuthi lena isofthiwe yasekhaya-engadini kanye nekhishi ukuthi wonke umuntu angalanda futhi asebenze ngamahora ambalwa wokusebenza. UJohn de Mol (ANP) unomsebenzi ongcono:
24 March 2019 ku-15: 59
Isibonelo kwaba okuthiwa ukuhlaselwa e-Amsterdam ..
24 March 2019 ku-21: 46
Okubhalayo kulungile. Kuyadabukisa ngokucabanga okuzimele okuzimele koDutchman ovamile. Yeka izwe. Benzani.
27 March 2019 ku-19: 06
Ingabe kwakukhona ndawo, emibonweni ka-AD, ukuthi "yayingekho inhlonipho" yezisulu?
26 March 2019 ku-11: 58
Ngakho asikwazi ukuthi ungubani, ngakho asikwazi ukuhlola ukuthi ikhona ngempela yini?
27 March 2019 ku-07: 58
Igama lakhe linguMelanie (AD), ingabe nabo bayayichaza? Ukwenza okuthile okungaqondakali ngomuntu, okwakuthiwa empeleni kubonakala sengathi ukhona ngemuva kokunciphisa kancane. I-Ms Martje Foundation isuse yonke imilayezo (lapho ngibhekisela kumqondisi wesisekelo, ubaba wakhe) ... omunye wesifazane wakhuluma ngodade nomama kaRoos owayezoba khona. Unomndeni omuhle, ngakho 'umakhelwane uhlela konke'. U-Dirk Kleppe (umqondisi) nomqondisi womngcwabo uRené Werner banesikhathi esidlule njengomeluleki wezezimali .. Ubaba René Verschuur uneFB kodwa ngu-1 nezinye Verschuur kuphela, unina u-Lenie, ongenawo amanye ama-Verschuurs. Isithombe sokugcina ubaba nendodakazi kuvela ku-2014 ....
27 March 2019 ku-22: 51
26 March 2019 ku-15: 08
Kulungile, kungani umthetho we-'imfihlo 'ulamukelwa? Akufanele ukuvikela isakhamuzi kodwa uhulumeni angakwazi ukugcina okuningi ngendlela ejabulisa ngayo imfihlo ebantwini abajwayelekile lokho uhulumeni akwenzayo.
Ngibona ukuthi isisulu, ngakho-ke ngiyambiza, ngiqashe ummeli osemthethweni wesimangalo. Baziphi ukuthi bangathola kuphi ukuze iskriphthi ingaqhubeka?
« Owesolwa osolwa ngokubulala uGökmen Tanis waboshwa, mhlawumbe umdanso womndeni
I-Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Isibungu saseMinerva sisakaze amaphiko alo" »
Ukuvakashelwa okuphelele: 11.626.863
Ikhamera ye-2 op Iforamu ebikezelwe yeForum for Democracy (FvD)
Ikhamera ye-2 op Kungani i-transgender iba yinto evamile yekhulu le-21 futhi ubungqingili buvele buvele